Noho ny valanaretina avokoa…
Manoloana ny fitarainan’ny vahoaka, nilaza ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka fa ampy ny fanafody fitsaboana ny valanaretina Covid-19. Saingy, misy ireo tsy marary nefa maka fanafody, mivarotra izany antsokosoko na amin’ny tambajo-tserasera. Mandray andraikitra ny ny amin’izany ny fitondram-panjakana.
Notokanan’ny filohan’ny Repoblika ny fandraisana marary eny amin’ny EEP manara-penitra, Soamandra­kizay, ho fitsaboana ny Covid-19 (CTC). Nambarany fa efa misy ireo hotely mandray marary. Maimaimpoana avokoa ny fitsaboana izay ny fanjakana ny miantoka azy fa ny saran’ny hotely no efain’ny marary amin’izany.
Nanao fivoriana dinikasa tamin’ireo loholona ny minisitry Fahasalamam-bahoaka ny amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny Covid-19. Nilaza ny filohan’ny Antenimierandoholona fa famondronan’ny andrimpanjakana rehetra hery izao, hampiakarana ny moralin’ny vahoaka latsaka ambany.
Mbola noho ny fihanaky ny Covid-19 ihany, nampiana tapa-bolana ny fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra amin’ny sekoly rehetra. Arakaraka ny fivoaran’ny valanaretina ny hiverenan’ny fisokafan’ny sekoly na tsia. Na izany aza, anjaran’ny sekoly tsirairay avy ny mitady izay fomba hanohizana ny lafiny fampianarana.
Noho ny hamehana ara-pahasalamana, nahitsy ho ao anatin’ny 21 fa tsy valo andro aorian’ny fianianana ny fifidianan’ny mpanolotsaina avo izay ho filohan’ny Fitsarana avo mom­ba ny lalàmpanorenana (HCC). Santionany ireo… Saika noho ny fihanaky ny Covid-19 avokoa izay atao rehetra amin’izao? Mila miady…